अन्तरवार्तामा रहेका समाचारहरु
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा हेर्ने मुख्य कुरा आर्थिक लाभ नै हो : डा. महत
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भोलि शनिबार नेपाल आउँदैछन् । नेपाल अहिले उनकै भ्रमणको तयारीमा जुटिरहेको छ । काठमाडौंका सडकको स्तरोन्नति र स्वागतद्वारको निर्माणका काम भइरहेका छन् । नेपालले विश्वमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई निकै महत्व दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सी भ्रमणका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग बिहीबार छलफल गरे । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वपरराष्ट्र एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि सहभागी थिए । महतले...
कोहलपुर ।बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहेकी कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरी यतिबेला बजेट निर्माणमा व्यस्त छिन् । स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको समेतको नेतृत्व रहेकी उपप्रमुख चौधरीलाई पदीय दृष्टिले यतिबेला स्वभाविक भार छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५ बमोजिम राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, आन्तरिक आयको विश्लेषण तथा अनुमान लगायतका कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।...
सानो उमेरमा समाज सेवामा धेरै कमले गरेका हुन्छन्।त्यस्तै नेपालगन्जमा पनि सानै उमेर देखि समाज सेवामा अगाडी लागेकी नेपालगन्ज किशोरी सञ्जाल बाँकेकि सचिब पूजा बर्मा संग बागेश्वरीपोष्टले गरेको संछिप्त कुराकानी। १:समाज सेवामा लाग्नुको मुख्य कारण के हो? म पूजा बर्मा,म एउटा सानो मध्यम बर्गिय परिवारबाट रहेकी छु। मेरो बुवा नेपाल प्रहरी भएर पनि मलाई समाज सेवामा लाग्न मन लाग्यो। समाजमा धेरै प्रकारका गतिबिधिहरु रहेका छन्, जस्मा कति नकारात्मक छन् जो मलाई मन...
राप्रपा पार्टी र देशको बर्तमान अवस्थाका बारेमा राप्रपाका यूबा नेता ऋषिराज देबकोटा संग बागेश्वरीपोष्टकि राधा आचार्यले गरेको संछिप्त कुराकानी- राप्रपा प्रदेश नम्बर ५ को सदस्य सचिब जस्तो माथिल्लो र जिम्मेवारी पद सम्हाल्नु भएको छ, अब यस प्रदेशमा तपाईहरुको सँगठन कसरी अगाडी जान्छ? हो ,अवस्य पनि मेरो लामो राजनितिक सक्रियता र निरन्तरताको कारण मलाई पार्टीले बिश्वाश गर्दै यो जिम्मेवारी दिएको छ।यो अवसरलाई मैले प्रयाप्त प्रयोग गर्दै आगामी दिनमा सँगठनमा बढि ब्यस्त रहनेछु।हामी भर्खरै प्रादेशिक...
नेपालगन्ज २१ ,भदौ।अहिलेको परिवेशमा योगा मानव जीवनमा अति आवश्यक कुरा हो । यसलाई प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ। यसै वारेमा नेपालगन्जमा योगा सम्बन्धि प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएकी कृष्णा पाण्डेसंग बागेश्वरी पोष्टले गरेको कुराकानी। योगा भनेको के हो र यसबाट के फाइदा हुन्छ ! योगाको अर्थ आफूभित्र या आफ्नो चेतनाको बोध गर्नु हो। आफूभित्र भएका शक्तिहरुको विकास गर्नु र आत्मसाक्षात गरी पूर्ण आनन्दको प्राप्ति नै योगा हो । यस यौगिक प्रक्रियामा विविध...
सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता र तिनमा सुधारका उपायसमेत सुझाएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्छ । महालेखाले जुन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षणसहित प्रतिवेदन पेस गर्छ, त्योभन्दा ठूला सोही प्रकृतिका अनियमिता बर्सेनि बढ्छन् । आर्थिक अनियमितताका प्रश्न बढिरहेका छन् । आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नु प्रणाली, कार्यान्वयन संयन्त्र वा समन्वय के अभाव हो ? सुधारका लागि कस्ता विधि अवलम्बन गर्ने ? यस्तै विषयमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा...
मेला सफल पार्न सबैको सहयोगको अपेक्षा छ : अधिकारी
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा गत माघ २६ गते देखि फाल्गुण ८ गते सम्म ‘कोहलपुर औद्योगिक ब्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्स २०७४’ संचालन भइरहेको छ । मेला संचालनका लागि विभिन्न उप– समितिहरु गठन गरिएका छन । यसै सन्दर्भमा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव एवं मेला संचालनार्थ बनेको सचिवालय उप–समितिका संयोजक समेत रहेका तेज प्रसाद अधिकारी संग ब्यापार मेला सम्बन्धमा गरिएको कुराकानी : १. यस पटकको औद्योगिक व्यापार मेला कसरी संञ्चालन भइरहेको छ...
प्रादेशिक महोत्सबको उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी: बसन्त लामिछाने
माघ १०, नेपालगञ्ज। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भोली ११ गतेदेखि सुरु हुने प्रादेशिक महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। वसायिक, कृषि, जडिवुटी, अटोमोवाईल्स, रेष्टुरेन्ट र १६ विदेशी स्टलसहित महोत्सवमा ३ सय २१ स्टल रहेका छन। सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २४ वटा सिसी क्यामेराबाट महोत्सब परिसरको निगरानी हुनेछ । वहुउद्देश्यीय सभा–गृह तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माण सहयोगार्थ महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । यसै महोत्सबकै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बाँकेका बरिष्ठ सदस्य एबम महोत्सबका प्रेस...
राजनीति मेरो पेशा होइन, जनताप्रतिको सेवा हो–सफिक बेहना
माघ ८। नेपालगञ्ज उपमहानगरपलिकामा २३ वडा छन् । २३ वडामै नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि जनताले धेरै आशा गरेका छन् । ४ नम्बर वडा बजार क्षेत्र भएकाले यो वडालाई पनि सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । ४ नम्बर वडामा भइरहेका विकास निर्माणका काम र भावी योजनाबारे बागेश्वरी पोष्ट डट्कम्का सौरभ गिरीले वडा अध्यक्ष मो.सफिक बेहनासंग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानी– १. तपाईं अध्यक्षमा निर्बाचित भएको ६ महिना बितिसक्यो…..कस्तो महसुस भएको...
माओबादिले सम्मानजनक एकता चाहेको छ : महरा
समसामयीक राजनीतिक परिवेशमा दाङ्ग स्तिथ तुलसीपुरका पत्रकार नारायण खड्काले दाङमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासँग लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश: दुई पार्टी एकताको प्रयास कहाँ पुगेको छ ? दुबै पार्टीवाट गठित कार्यदलले काम काम गरिहेको छ। कार्यदल वैचारिक र राजनीतिक संगठनको कामहरु प्रारुप बनाउछ, त्यसपछि पार्टी एकताले गति लिन्छ। पार्टी एकताको मोडालिटी के हो ? यो एकदमै सम्वेदनशील कुरा हो। हाम्रा केही बैचारिक मतभेद छन्, राजनीतिक मतभेद छन् । संगठन अलग अलग छन। दुई पार्टी हुन्।...